Kedu iwu maka ịgba ígwè? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Sakpụrụ iwu Usa - ịgba azịza nye ajụjụ
Sakpụrụ iwu Usa - ịgba azịza nye ajụjụ
Kedu iwu maka ịgba ígwè?
Iwu ịgba igwe
Ga-enwe ma ọ dịkarịa ala otu breeki na-arụ ọrụ.
Kwesịrị ịkwado ya na mgbịrịgba ma ọ bụ mpi.
Kwesịrị ịkwado ya na ihe ndị a mgbe ị na-agba ịnyịnya na chi ọbụbọ, mgbede ma ọ bụ n'ọchịchịrị: Igwe ọkụ na-acha ọcha (enweghị ihe karịrị abụọ) Ọdụ ọdụ na-acha uhie uhie. A red n'azụ ngosiputa.
(egwu kọmputa na-atọ ụtọ) - Ọ bụrụ na ịnweghị, ịgba ịnyịnya ígwè gburugburu obodo nwere ike ịbụ obere ihe ịma aka. - Cygba ịnyịnya ígwè bụ n'ezie fun na nnukwu n'èzí, ma ọ pụrụ ịbụ n'ezie fun na obodo kwa. Justkwesịrị ịmara banyere ihe egwu dị iche iche dị iche iche yana na ị na ndị ọzọ na-emekọrịta ihe n'okporo ụzọ karịa n'ime ime obodo. (egwu electronic na-adọrọ adọrọ) ​​Dị ka oge niile, tupu ị gawa, ọ nwere ike ịba uru iche echiche ntakịrị banyere ihe ị ga-eme, dị ka iche echiche banyere ebe ị na-aga, ụzọ ị ga-aga, na ihe ị na-aga mee n'ụzọ ị nwere ike izute.
Planninghazi ụzọ gị bara ezigbo uru n'ihi na ọ nwere ike inyere gị aka izere ebe ndị egbochiri ma ọ bụ ụzọ ndị a na-ahapụghị gị ịkwọ ụgbọala, ọ nwere ike inyere gị aka ibute ụzọ ụzọ ịnyịnya ígwè na ụzọ ndị na-abụghị naanị nchekwa ma na-adịkarị nwayọ na ngwa ngwa ma na-atọ ọchị karịa na-akwọ ụgbọala n'okporo ụzọ. Ugbu a, enwere ọtụtụ ngwa dị ukwuu maka ịhazi ụzọ gị site na igwe kwụ otu ebe. Dịka ọmụmaatụ, Kommot dị ezigbo mma, mana mgbe ị na-agagharị na gburugburu obodo, Google Maps nwere ọrụ igwe kwụ otu ebe na-arụ ọrụ nke ọma. (egwu kọmputa na-ebuli elu) - Ka anyị kwuo maka akụrụngwa - Ugbu a, ịchọrọ igwe kwụ otu ebe - Ee, mana ọ ga-abụ ihe niile ịchọrọ.
ukwuu ugu ose
Ka anyị chee ya ihu, n'ọtụtụ mba ịgba ịnyịnya ígwè bụ naanị otu ụdị nke njem, dị ka ịga ije ma ọ bụ ịnya ụgbọ ala. Ya mere, ọbụlagodi ikpu okpu agha nwere ike ime ka ị pụta ìhè.- Ee, mana enwekwara mba ebe ịkpu okpu agha dị mkpa n'oge niile, ọbụlagodi na igwe kwụ otu ebe, yana n'ụdị igwe kwụ otu ebe ọ bụla.
Na ya onwe ya, ọ bụrụ na anaghị m eleta ezinụlọ m na Holland ma na-agba ịnyịnya igwe obodo m ebe ahụ, enwere m ike ịnweta okpu agha na ụdị njem igwe kwụ otu ebe m gara - rue ngwa ngwa na-aga, isi iyi ọkụ bụ ezigbo echiche . Oké mkpa mgbe ọchịchịrị gbara. Ma otu mgbịrịgba ọzọ, n'ihi na ihe kachasị mkpa mgbe ị na-anya ụgbọ ala n'obodo bụ mmụba nke ndị ọrụ okporo ụzọ.
Yabụ ihe ọ bụla nwere ike inyere gị aka ịhụ ma ọ bụ nụ bụ ezigbo echiche. - Eeh, na ihe ikpeazu aga m akwado igenye ebe o ga-abụ mkpọchi n'ihi na o mere ka ịzụ ihe di otutu karie ike - Aka nri - Knowingmara na igwe kwụ otu ebe gị ka nọ ebe ahụ mgbe ị pụta - Na-agbanwe agbanwe ma dịkwa jụụ ka ị ghara na-agba ịnyịnya oge niile Na-echegbu igwe kwụ otu ebe agaghị adị gị mgbe ị rutere - Hey, ị nwere ike ịga Osimiri maka mmiri ice cream - are na-echegbu onwe gị n'eziokwu ahụ bụ na obodo niile nwere osimiri nwere. (ọchị) Music) - Anyị metụrụ na nke ahụ n'oge dị nkenke, mana ị yi uwe na-atụgharị uche, ọkachasị na ogwe aka gị na ụkwụ gị, nwere ike ime ka a mata ya karịa - n'ihi na ebumpụta ụwa nke ụbụrụ mmadụ iji mata usoro mmegharị ihe biomechanical. - Anyị kwukwara ọkụ , ma ndị a na-abawanye visibiliti maka ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ. - Na akpa gị nwere ike ịbụ ebe dị mma iji tinye ndị ngosipụta, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịchọghị iyi uwe pụrụ iche.
Dịka ọmụmaatụ, akpa a na-atụgharị uche dị mma n'ihi na ị nwere ike ịhụ ya site n'akụkụ niile. (egwu kọmputa na-atọ ụtọ) - Ndụ obodo buru ibu nwere ike ibute ụdị ihe egwu niile sitere na ụmụaka na-aga akwụkwọ, ndị mmadụ na-ejegharị nkịta ha, olulu mmiri, mkpuchi mmiri, ọbụlagodi gwongworo ma ọ bụ bọs. Na hey, ọbụnadị ịchọrọ ịkpachara anya maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè bụ ndị na-eme ka anyị niile nwee aha ọjọọ - biko echela na ị nwere ike ịfefe na nkwụsị na nkeji ikpeazụ - ịkwọ ụgbọala na-acha uhie uhie dị egwu ma enwere ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ. ịmasị anyị, nke anyị nwere ike ịchọrọ izere - Ee.
Nkọwa ikpeazụ bụ na ọ bụrụ na obodo gị nwere igbe igwe kwụ otu ebe na ọkụ ọkụ ọ bara uru iji isiokwu, ọ bụghị naanị na ndị ọrụ okporo ụzọ ga-ahụ gị anya. Ọ bụrụ na ọ na-acha akwụkwọ ndụ, ị nwekwara ike ịhapụ n'oge. Nyere oke ịgba ọsọ dị ihe dịka kilomita iri atọ kwa elekere n'ọtụtụ obodo, nke a ga - eme ka ị nọrọ n'ihu okporo ụzọ, ikekwe rue mgbe ọkụ ọkụ na - esote. (egwu electronic obi ụtọ) - Ọ dị m ka ọ nọ n’obodo, omume gị dị mkpa karịsịa.
Ọtụtụ ndị anyị nwere ike ịhụ gị na ihe ị na-eme. Ya mere, enyekwala onye ọ bụla ohere iburu ihe ọjọọ ị mere nke ha nwere ike iji megide gị ma ọ bụ ndị ọgba tum tum ndị ọzọ. Ọ dịkwa ezigbo mfe, ihe niile ị ga - eme bụ imeso ndị ọrụ ụzọ ndị ọzọ na ndị ọzọ na - agba ịnyịnya etu ị ga - esi chọọ ka emeso gị onwe gị.
Jiri nkwanye ugwu ma buru ụzọ ma ọ bụrụ na ị ga-eme ya. Buru n'uche na a na-akọrọ ọtụtụ ụzọ igwe kwụ otu ebe n'ihi ya enwere ndị na-agagharị ebe ahụ, yabụ atụla anya ịnyagharị na-aga n'ihu. Obere ekele ma ọ bụ ịmụmụ ọnụ ọchị nwere ike ime nnukwu ihe mgbe gị na ndị ọkwọ ụgbọala na-emekọ ihe, ndị na-agba ịnyịnya ígwè, na ndị ji ụkwụ aga.
Marakwa na site n’okike ị na-ebu dị ka onye n’ịnyịnya ígwè, ị na-abụkarị ihe kasị dị ize ndụ na njem nkịtị. Ya mere lezienụ anya maka ụmụaka, nkịta, ndị ji ụkwụ aga, zombies ekwentị. Chọghị imejọ ya, ị chọghịkwa imerụ onwe gị ahụ site na ịdapụ ma.
Amaara m nke a n'ihi na nkịta kụrụ m na mbido afọ a, n'agbanyeghị na ọ bụ nkịta ahụ. Ọ bụrụ na m ga-akwụsịtụ ntakịrị ma zere inwe mmerụ ahụ. - Ikekwe ọ bụrụ na ị nwere mgbịrịgba Emma, ​​nke nwere ike ịba uru dị ukwuu na ụzọ ịnyịnya ígwè iji dọọ ndị njem na ndị ọgba ịnyịnya aka na ị ga-agabiga.
Ndị mmadụ na-ejikarị obi ekele dị ukwuu eme ka ha mara na ị nọ ebe ahụ. Ọ bara uru karịsịa mgbe ị na-agabiga. (egwu electronic obi ụtọ) Otu n'ime ihe ndị kachasị ewu ewu na obodo bụ ịzụ ahịa.
Gini mere ị gaghị aga ahịa gị ma jupụta ụgbọ ibu azụmahịa gị? ihe ndị mepere emepe ma buru ya na igwe obodo gị. - Ugbu a, akpa ịnyịnya ígwè gị bụkwa ụzọ dị mma iji mee ka ọhụhụ gị dị n’okporo ụzọ, dịka e kwuru na mbụ. Gba ígwè n’obodo bụ ahụmịhe na ahụmịhe na-atọ ụtọ.
8848 mita na kilomita
Ọ bụ ụzọ dị egwu nke njem na ịgagharị. Mana ikwesiri ịkpachara anya ma mara etu omume gị ga-esi metụta ndị ọzọ, mana nke kachasị, pụọ ebe ahụ ma nwee ọ .ụ. Ọ bụrụ na isiokwu a masịrị gị, nye anyị mkpịsị aka aka wee pịa ala ebe ahụ maka atụmatụ ndị ọzọ maka ịgba ịnyịnya ígwè n'obodo ahụ.
Kedụ ka m ga-esi nyabanye igwe kwụ otu ebe na USA?
NaUnited States, onye obula aghaghụgbọalan'akụkụ aka nri nke okporo ụzọ. Mgbenọkwasinke giigwe kwụ otu ebemegide usoro okporo ụzọ. Generally na-ejikarị otu ohere ahụ dị ka ndị ọkwọ ụgbọala ndị ọzọ ma soro ha kerịta otu ụzọ. Ọ bụrụ na uzo dị obosara iji soro ụgbọ ala ọzọ (ihe dị ka 14ft / 4m),nọkwasi3ft / 1m n'aka nri nke okporo ụzọ.
Isi ihe kpatara na ị gaghị ebugharị obodo bụ nchegbu maka nchekwa. Echere m, ọ nwere ike ịbụ ezigbo egwu na nkwụsị na-arụ ọrụ na ọtụtụ ụgbọ ala na-agagharị, mana ọ gaghị adị mba, yana ndụmọdụ na ụfọdụ ndị ọkwọ ụgbọ ala oge niile ị nwere ike iwulite nka na ntụkwasị obi gị n'isiokwu a, m ga-enye gị Atụmatụ na-enyere m aka na ị na-eche mma na obi ike mgbe ụgbọala. Ka anyị gaa, tupu ị gaa, ka anyị gbaa mbọ hụ na igwe kwụ otu ebe ị na-agba na-echekwa nke ọma yana ọnọdụ dị mma yabụ lelee breeki gị na ha ga-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ha, lelee nrụgide taya ahụ ka ọ bụrụ na ị gaghị akwụsị ịnweta ndị ahụ niile taya na gini ghle lelee gia gi ka ha ghara ileghara.
Nọgidenụ na igwe kwụ otu ebe na-elu ụdị iji jide n'aka na ị na-adịghị na-adọpụ uche site squeaks ma ọ bụ ndị yiri rattles n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma ọ bụrụ na ị mere nke ọma mgbe ahụ i nwere ike ịga n'okporo ụzọ ma kwadebe gị igwe kwụ otu ebe na n'ihu na n'azụ ọkụ karịsịa n'oge oyi mana ị nwekwara ike ịme oge okpomọkụ a ga - enyere gị aka ịpụta anya. Mgbe ị na-akwọ ụgbọala n'abalị, mana yana elekere ọkụ, ọ dịkwa mma ịhapụ ọkụ na igwe kwụ otu ebe ka ị ghara ichefu ha, yana ihe kpatara na-eche banyere ha, Na-agbakwunye ihe abell gị igwe kwụ otu ebe - a ana achi achi na Destry maara na maara gị igwe kwụ otu ebe. Ọnụnọ kwadebere ma kwadebere ga-enyere gị aka belata ma jikwaa ihe egwu niile obodo nwere ike ibute maka ndị na-agagharị na ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike, na ihe ịtụnanya ndị ahụ a na-atụghị anya ya kwa ebe ọfịs adịghị n'okporo ámá m na-ekwu, egwu kachasị nke ịla n'iyi n'obodo ma ọ bụrụ na ị don 'Amaghị m ebe ị nọ. Ndụmọdụ kachasị elu maka gị, ọ bụrụ na ịchọta onye otu ma ọ bụ enyi ị ga - eso wee mee nke a ka ị nwee ike ilekwasị anya na onwe gị na gburugburu gị kama ị ga - ahụ maka ntụzịaka na mgbe ị ga - anya naanị m dị nwute n'ihi na enweghị m ntutu mgbe ahụ ọ bụ Ọ dị mma ịkwụsị nkwụsị na mpaghara dị mma ma lelee ụzọ ma lelee maapụ na ngwa ma ọ bụ ihe ejiri na aka gị n'ihi na ihe bụ Traffic na-adị ize ndụ, yabụ emela ka anya gị dị elu, ee, na ọkwa a ị maara ihe m na-ekwu site na ijikọ aka na ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ ga-agba mbọ hụ na ị hụrụ ya n'ụzọ dị mfe karị, mana ọ nwekwara ike nwee nchedo, ọkachasị mgbe ị nọ ya Na ntanetị dị ka nke a, ọ dị oke mkpa na ị ga-egosi nke ọma tupu oge eruo, ị nwekwara ike ịme anya na onye ọrụ okporo ụzọ a na-eme ka ị hụ na ị na-emeso nke ọma ma nye ya oge zuru oke iji gbanwee ihe ị ga-echeta mana lelee akara ngosi ahụ wee megharịa dịka Hank mere, ọ bara uru na-eme ma ọ bụrụ na ị na-eme nke a a jụụ onye Practice ụzọ yabụ ịnwere ike ịkwọ ụgbọala n'ahịrị kwụ ọtọ kamakwa lee anya n'azụ gị - dịka Hank mere ọnwụ m na-ekwu na nwa okorobịa ahụ maara ihe ọ na-eme, ọ bụ na ọ bụghị ndụmọdụ kachasị mma m nwere? nụtụrụla na ndụmọdụ kachasị mma m nwere ike inye gị bụ ịghara ịbụ onye ndu ma na-agba ịnyịnya oke amụma, na-agba ọsọ nke ọma maka ndị ọrụ ụzọ niile ị maara nke ọma ihe ị na-eme ma nwee ike ikpe ikpe dịka ọ dị mma iji ụzọ igwe kwụ otu ebe. ị nwere ike ịnya ụgbọ ala n'okporo ụzọ ma ọ dị mma, agbanyeghị, m ga-asị, agbakwala nso na nsọtụ nke okporo ụzọ, ọ bụghị na gọta, n'ihi na nke ahụ ga - agba ndị ụgbọ ala ume ịbịakwute gị nke ọma, gị Agaghị enwe ike izere ihe egwu dị ka ụgbọ ala a na-adọba ụgbọala ma ọ bụ olulu mgbe ị nọ n'okporo ụzọ, ọ bụ ezie na ịnwere ike ijikwa ụzọ ahụ ma nye onwe gị ohere zuru oke iji nweta ohere zuru oke ma ọ bụrụ na ị nwere ihe ọghọm dị ka ụgbọ ala na-adọba ụgbọala ma ọ bụ ezumike manegbagharị gburugburu ya, na-ewere ụzọ a bụ iwu ma kwado ya na ntụpọ ìsì nke Highway Code Ee, ha dị adị, ọkachasị na nnukwu ụgbọ ala, mana otu ihe ị ga-elezi anya agaghị abụ onye a ga - ewere n'ihi na ebe ndị na - egbuke egbuke na ụgbọ ala ndị a buru oke ibu ma ha nwere ike ghara ịhụ gị ka ị na-awagharị n'ime ebe siri ike e tupu ha agbanye ị nwere ọtụtụ ụlọ naanị ma ọ bụrụ na ha tụgharịa ma gbaa mbọ hụ na ị nwere ike ịhụ ha na onye ọkwọ ụgbọ ala nwere ike ịhụ gị mgbe ọ dị mma ịme ya ọkachasị na mmiri ma ha nwekwara ibu zuru oke dị iche iche cobblestone, ihe na ọbụna korota mgbe ị na-akwọ ụgbọala na mmiri, ma zere ndị na-acha ọcha ma ọ bụ ọbụna ndị edo edo edo karịsịa mgbe ị na-agbanye na ụfọdụ obodo enweghị ha, mana usoro tram nwere ike bụrụ ihe na-egbu egbu, ọkachasị ma ọ bụrụ na ịnwetara igwe kwụ otu ebe gị n'otu. n'ime ha n'ihi na m mụtara na ahụmịhe na ọ naghị akwụsị nke ọma, yabụ mgbe ị batara na tram ahịrị ma ọ nwere ike nwee ngagharị, ọ bụrụ na ịnwere ike ikpuchi mkpuchi mmadụ, mana ọ bụrụ na ịnweghị ike izere ya, ogologo n'elu ya na-enweghị braking, n'ihi na ị bụ m Guinness kapu tt na-eme na ihe agaghị ma nke ọma anyị niile mere mana ịmara mgbe ị ga-abịa mgbe enwere ọtụtụ ndị na-agba ịnyịnya ma na ị nwere ike ịsọ mpi na agbụrụ na ndị njem ndị ọzọ mgbe ahụ ị ga-erute ebe ị na-aga ma ọ bụ ọsụsọ gị ihe m ga-asị don ' t ụgbọala, pụọ n'ọsọ ahụ ma nwee ọ yourụ na njem gị dị ezigbo mma ma dịkwa mfe ma otu ahụ ị merie.
Anaghị m abata ọsụsọ niile ma ị nwekwara ike nke ọma agaghị m egbutu ndị ọzọ na-agba ịnyịnya ígwè na usoro gị. Enwe obi uto na njem gi na-arụ ọrụ m na-ekwu na ọ bụ izu ike iji oge iji zuru ike, enwere m olile anya na usoro ndụmọdụ ndị a enyerela gị aka ịme gị obi iru ala, na-ekpori ndụ, mana nke kachasị mkpa, nọrọ na nchekwa ka ị nọ na Drive. Na-elekọta ihe niile m ga-ahụ n'isiokwu na-esonụ yep
You nwere iwu iwu ikpu okpu agha mgbe ị na-agba ịnyịnya?
Ọ kwesịrị na m ga-eyi okpu aghamgbe oleMokirikiri? Enweghị iwu nke na-akpalindị na-agba ịnyịnya ígwènke afọ ọ bụla tokpọọ okpu-agha. Otú ọ dị, o doro anya na ọ dị ize ndụ ịgbagharị na-enweghị otu, na Highway Code na-egosi ihe niileNdị na-agba ịnyịnya ígwè na-eyinchekwa na nke dabara adabaokpu aghan'agbanyeghị ihe iwu kwuru.Febbọchị 6 2017
Ndị ọgba tum tum nwere ike ịgba ịnyịnya n'etiti ụzọ?
Gbaa ịnyịnya n'etitinke uzo
Ọbụghị naanị na iwu kwadoro ya maka aonye na-agba ígwèkanọ n'etitinke uzo, o nwere aha: isi ochichi, ma obu 'iwere uzo'. Nọmalịndị na-agba ịnyịnya ígwèkwesịrịnọkwasina ihe akpọrọ ọnọdụ nke abụọ, ihe dịka 30cm rue 1m site na ụzọ.Ọkt 31 2017
Yabụ na enwere agbụrụ abụọ, echiche bụ onye na-agba ịnyịnya na onye ọkwọ ụgbọ ala nwere okporo ụzọ, onye nwere ikike iji ụzọ ahụ, ekwesịghị ịdị na ndị ọkwọ ụgbọ ala nwere ike iche ihe kpatara onye a na-anya ụgbọ ịnyịnya na etiti n'okporo ámá, bụ ọ na-akwụsị m? A ga-ejide ya, mana enwere ihe kpatara ya na ọ bụ nke okirikiri, na onye na-agba ígwè na-eche ihe kpatara na ọ na-apịpu n'ọnụ ụzọ a ma ọ bụ ọpụpụ n'okporo ámá ma ha bụ ndị nkuzi dị mkpa, anyị maara ya ma anyị na-akparịta ụka ụmụ akwụkwọ anyị ma gbalịa ịghara ime ka ndị ọkwọ ụgbọ ala ọzọ na-eche n'ụzọ ahụ n'ihi na anyị niile ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ enweghị ike ịgbanwe ihe ha na-eme, mana anyị nwere ike ịgbanwe etu o si emetụta anyị, nke ahụ dị ezigbo mkpa dị ka onye ọkwọ ụgbọ ala, mana ndị ọkwọ ụgbọala izugbe nwere ike inwe ike ịmara ma nwee ọmịiko na ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ yana ihe ha nwere ike ime. Ndị nkuzi na-akwọ ụgbọ ala nwere nnukwu ọrụ ịkụnye mmetụta ọmịiko maka ndị niile na-eji ụzọ na ọrụ maka ndị ọkwọ ụgbọ ala iji hụ na ha nọ n'akụkụ ndị nwere ọrụ Cyclists na-arụ ọrụ ha n'ime ka ụzọ dị mma maka onye ọ bụla. Yabụ na ọ dị ezigbo mkpa ka ha ghọta ihe ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eme wee mee ka ndị a zụrụ nke a mara nke a, yabụ na anyị kwesịrị ị closea ntị nke ọma n’ebe ndị na-agba ịnyịnya ígwè nọ mgbe anyị na-akụzi ihe, anyị ga-etinyekwa uche nke ukwuu n’ịkụziri ndị na-amụ ihe otu esi akwọ ụgbọala. onye na-agba ígwè na ihe umbikeability na-akuzi ma webata n’ime ihe mmuta anyi nke ihe ndi ndi cyclist nyere anyi na ihe kpatara ha ji eme ihe ufodu, ihe kpatara ha ji aghari n’etiti uzo ihe bu ihe ahu na mgbe anyi matara na anyi puru inyefe ya umu akwukwo anyi. na ụmụ akwụkwọ anyị na-aghọta ya na nke ahụ dị ike ma dị mkpa.
Primary ọnọdụ bụ ikekwe otu n'ime ihe ndị kasị esemokwu akụkụ nke mba ọkọlọtọ, na bike ọzụzụ dabeere na ya pụtara na ị na-etiti, na-a ọnọdụ n'okporo ụzọ, na gị igwe kwụ otu ebe na etiti nke uzo nke Kama nke na-akwọ ụgbọala tere aka n'aka ekpe, ị nọghị na gọta, ọnọdụ ọzọ a na-ejikarị Nke a bụ ọnọdụ nke abụọ na nke ahụ bụ aka ekpe nke ụzọ ụgbọ mmiri nwere ike ịbụ otu mita site n'akụkụ ọ bụghị na ndị na-agba ịnyịnya Rinneso na-arụ ọrụ na ọnọdụ abụọ a isi na sekọndrị, a na-akpọ ha ụlọ akwụkwọ sekọndrị n'ihi na isi ọnọdụ kachasị mma na-atụ aro onye na-agba ịnyịnya bụ isi bụ ihe nzuzu maka ndị na-enweghị ahụmịị na ndị zụrụ azụ iji mmuo ebumpụta ụwa, ga-atụ aro izere ịzụ ahịa ma ọ bụ were igwe kwụ otu ebe n'okporo ụzọ ma ọ bụrụ dị oke egwu ma nwee ikike ịmara etu esi akwaga n'ime mpaghara bụ isi ma jide mpaghara bụ isi site na mpaghara dị warara ebe enwere egwu ịchụga nwere ike ịdị ize ndụ, site na uzo ebe ichoghi ka mmadu weghaa gi ma oburu na ino n'otu uzo, i nwere ikike zuru oke iji uzo a, ya mere, o kachasi nma igbanye uzo di na uzo, ijide na iji ohere a, enwere Dị ka onye nkuzi, ọ dị ezigbo mkpa ka anyị mee ka ụmụ akwụkwọ ahụ na anyị onwe anyị mata maka rosaries ndị ọzọ n'okporo ụzọ na-eme, ma ọ bụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè, ndị ji ụkwụ aga, ndị nwere ngagharị, ka anyị kesaa n'okporo ámá ahụ. anyị na onye ọ bụla nwere ikike ịnọ ebe ahụ, dịka anyị anaghị eme maka ụgbọ ala, ọ bụ maka ndị ọrụ ọ bụla n'okporo ụzọ, yabụ ọ dị ezigbo mkpa ka anyị wegara ndị anyị na-amụrụ ihe a, n'ihi na ọ bụrụ na anyị aghọtaghị na ndị anyị na-amụrụ ihe anaghị 'Aghọtaghị ya, ma ọ bụrụ na anyị nwere ọmịiko ma anyị maara ihe kpatara ndị mmadụ ji eme ụfọdụ ihe, anyị nwere ike ịme egwuregwu egwuregwu a ọnụ, ọ bụ n'okporo ámá ọha, onye ọ bụla nwere ike iji ndị na-agba ịnyịnya ígwè ndị ọkwọ ụgbọ ala ọkwọ ụgbọ ala ọkwọ ụgbọ ala anyị niile nwere ịkekọrịta ihe anyị chọrọ iwu okporo ụzọ ndị a bụ okporo ụzọ iwu anyị nwere ụkpụrụ nke obodo en maka ịgba ịnyịnya ígwè anyị nwekwara ọkọlọtọ mba maka ịgba igwe, yabụ otu n'ime ihe isi ike ndị mmadụ anaghị amata ọtụtụ ihe gbasara ọkọlọtọ obodo maka ịgba ịnyịnya ígwè nke na-esite na Bikeabil? Ndị na-azụ ọzụzụ na-adịkarị ka ha amaghị na mgbe ndị ọgba tum tum na-eche ihu ma mejọọ ha, ọ na-adị ha ka ha nọ n'ụzọ ha ma n'ezie ọ bụ naanị onye ọrụ okporo ụzọ ọzọ na-ebute ụzọ wee nwee ike ịkekọrịta ya na onye ọ bụla ọzọ ka ọ dịrị n'ezie . Ọ bụghị ikpe maka onye ọ bụla na-arụ ọrụ n'okporo ụzọ nwere nkwupụta dị elu n'okporo ụzọ, anyị niile na-arụ ọrụ nke ọmịiko na ọzụzụ ịnyịnya ígwè na ọzụzụ ọkwọ ụgbọ ala bụ ịkekọrịta n'okporo ụzọ a ma zụọ ndị ọzọ otu esi ekekọrịta ya nke ọma, yabụ anyị tụbara lelee ụkpụrụ mba anyị nwere ole na ole anyị na-eso dị ka ndị nkuzi ịkwọ ụgbọ ala na m ga-agụ ya naanị maka ịmụta na n'ụzọ nkịtị abụghị ọrụ m, dị ka a ga-asị na ị maara m, ị maara nke ahụ na ngalaba ahụ na-ekwu nke ahụ iso ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ rụọ ọrụ na-enye ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ oge na ohere zuru oke iji rụọ ọrụ, yabụ nke a abụghị naanị ịtụgharị okporo ụzọ, ọ nwere ike ịtụgharị aka ekpe na aka nri, ihe ndị a niile na-ebelata iwu ndị dị maka ndị ọrụ okporo ụzọ ndị ọzọ. tinye ntụgharị ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-eme ihe ha kwughachiri, dịka ọmụmaatụ ọkachasị ndị ọkwọ ụgbọ ala nke nnukwu ụgbọ ala ma ọ bụ ndị ọrụ ụzọ na-enweghị nchebe dịka ndị na-agba ịnyịnya ígwè u Motorcyclists na ọnọdụ ha nwere ike ịhọrọ n'okporo ụzọ, yabụ ọ dị ezigbo mkpa na anyị maara maka ihe ndị a n'onwe anyị ka anyị wee anyị maara ihe kpatara ihe ndị a ji eme na anyị nwere ike ịkọrịtara ụmụ akwụkwọ anyị chere na Ọnọdụ a n'ihu gị na-anya ụgbọ ala ma hụ onye na-agba ịnyịnya n'ihu gị na ụgbọ ala na-abịaru n'akụkụ nke ọzọ ị ga-achọ ịkwọ ụgbọala gafere onye na-agba ịnyịnya mana ndị na-agba ịnyịnya ígwè n'etiti uzo kedu ihe mere ị ga - eji were ya lee anya nke ịnyịnya agha Knowingmara na ịnweghị ohere ị gafere mgbe ụgbọ ala na - abịa n'akụkụ nke ọzọ ma gbochie gị ịme mkpebi na - ezighị ezi, nyere ha aka site na idobe onwe gi ka ighara igha n’ihu mgbe enweghi ebe itughari nkpuru aka gi n’ime onye gbara okirikiri di ukwu n’ebe ahu ma oburu na ha emeghi ya, a gha apia gi ghawara ma uzo ezughi ezu z maka cycgba igwe chebe onwe gị site na ịtọpụ onwe gị na gị na bọs na ndị njem ya niile, ị meela mkpebi mara mma ebe ahụ na mgbe ụfọdụ, onye nwere obi ike ma ọ bụrụ na ịmaghị nke ọma ebe ị ga-eme n'obodo ahụ dị ka netherlands nwere akụrụngwa ka mma karịa gị s maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè na anyị anaghị enwe nnukwu akụrụngwa maka ndị na-agba ịnyịnya ígwè ihe ndị a na otu esi akpa agwa ihe kpatara ndị na-agba ịnyịnya ígwè ji eme ihe ụfọdụ n'okpuru ọnọdụ ụfọdụ yana otu esi emeghachi omume n'ọnọdụ ndị dị otú a ike ịgba ịnyịnya bụ ihe ngwọta nke ọtụtụ iji nyere ọtụtụ ndị aka ịnyịnya ígwè ha ọtụtụ mgbe na nchekwa Ọ bụghị ihe owuwu akụrụngwa Ọ bụ ihe mgbanwe omume omume Ọzụzụ na ọzụzụ iji kwadebe ndị mmadụ nwere ikike na obi ike ịgbagharị n'okporo ụzọ dịka ụzọ dị taa, ka anyị leba anya n'okwu a e, nke anyị nwere ike iji ma na-apụ oge obula na igha site na ndumodu bu ozigbo, imara, anyi kwesiri ikwu ozugbo ihe ahu na-agwa mmadu n’amaghi ama, na m bu otu ihe, m gafere nke ahu bara uru nye ndi n’enweghi ike dika ndi n’abia ije na ndi ije na ndị dị otú ahụ mgbe anyị chere na anyị nwere ikike, mgbe ahụ anyị ga-enwe nsogbu ịgbanwe okwu ahụ na mkpa.
Ọ nwere ike ịdị ka igwu egwu na okwu, ọ dị ezigbo mkpa, ọ nwere ihe ọ bụla metụtara echiche anyị nwere mkpa, anyị nwere ike ibute ụzọ, mana anyị enweghị ike ibute ụzọ na nke ahụ bụ ezigbo ahịrịokwu ndị mmadụ maara nke bụ na ha nwere ihe kacha mkpa mana n'ezie ọ nwere ike ịka mma ịhapụ onye ahụ ka ọ gafere wee nwee ike ịga n'ihu kama ịnwe ụzọ ziri ezi ịkwanye onwe m site na ndị ọkwọ ụgbọ ala, ọ bụ na ha anaghị eme ya ise? Ọtụtụ afọ na afọ ha ga-eme 35 awa ọtụtụ n'ime klaasị na otu n'ime ebe ha nwere ike ikpuchi bụ ndị na-ahụ ụzọ n'okporo ụzọ na nke ahụ gụnyere ndị na-agba ịnyịnya ígwè na ndị na-agagharị agafe na ihe ndị dị ka nke ahụ ma echere m na ọ bụrụ na ha emee nke ahụ, ndị ọkwọ ụgbọ ala kwesịrị ma ndị ọkwọ ụgbọ ala nwere enweghị usoro dị otú ahụ, yabụ ọrụ anyị bụ ijide n'aka na ndị ọkwọ ụgbọ ala maara ụdị ihe ndị a ma mara nke ọma otu ndị ọrụ okporo ụzọ si emetụta anyị dịka ha na-emetụta ndị ọkwọ ụgbọ ala dịka ndị ọkwọ ụgbọ ala Larry na-emetụta ha dịka ndị na-agagharị agafe na-emetụta anyị ma gafere ha niile ihe ndị a kama ị na-anya ụgbọ ala n'ihi na ndị folks gị nwere ike ịpụ nke ọma ma mesịa kwaa ụgbọ ala ụbọchị abụọ gafere ule ma gịnị bụ ihe ahụ? Ọhụụ olee otu o si dị iche, onye na-agba ịnyịnya ígwè anyị ga-ejide ha ntakịrị karịa mgbe ha na-anya obere ụgbọ elu ntakịrị, dịka ọmụmaatụ ka ha wee nwee ike ịbanye n'okporo ụzọ igwe kwụ otu ebe, yabụ ọ dị ezigbo mkpa na anyị ji ụdị mmụta a mee ụdị ihe a. Ndị ọkwọ ụgbọala na-ekpuchikwa, ọ bụrụ na ị nwere ndị mmadụ na-abịakwute gị ka ha gwuo obere, chọpụta ihe ha mere mana ogologo oge ole ka ha jiri igwe kwụ otu ebe mgbe niile, kedu ka ha ga - esi tinye nke ahụ na ịnya ha? Ọ dị mma, lee ụfọdụ akụkọ ifo na echiche na-ezighi ezi, enwere ihe dịka ndị na-agba ígwè bụ ndị chọrọ ịnwe mkpuchi na ndị ọgba tum tum ga-ebu ihe mberede ahụ, ndị ọgba tum tum ga-akwụ ụtụ isi n'okporo ụzọ n'ihi na anyị anaghị akwụ ụgwọ n'okporo ụzọ? Tụ isi, mana nke ahụ bụ mkparịta ụka ọzọ, ị maara, ha ga-eji ụzọ igwe kwụ otu ebe, ihe ndị a niile na-eme ma mgbe gị na ụmụ akwụkwọ gị na-akparịta ụka ma ha kwuo ihe ndị a n'ụzọ adịghị mma, ikekwe ọ dị ezigbo mkpa ịkparịta ụka na nke ahụ ị dịghị ekpe onwe gị ikpe, n'ihi na ana m anụ ndị nkuzi? na-ekpebi ndị na-agba ịnyịnya ígwè na ha kwesịrị ime nke a, ha ekwesịghị ime ihe ha na-eme, ọ dịghị mkpa na anyị enweghị n'ihi na anyị na-eri nri, anyị na-enye onye a ihe ọmụma na anyị na-eri nri, yabụ anyị na-eche na anyị abụghị ndị nkuzi, ha ewerela omume anyị Ọ dị mkpa n'ezie na omume anyị ziri ezi n'ihi na omume nwere ike iri ha mgbe ha nọnyeere gị
sram ndorondoro nyocha
Na75-nkena-achịna-ekwu na n'ime otu izu ọzụzụ, ọ dịkarịa ala75pasent nke maịlụ gị (ma ọ bụ oge) kwesịrị ịdị ma ọ bụ n'okpuru75pasent nke oke obi gị (MHR).
Mgbe opekempenọmbankeanyịnya igweonye kwesiri inwe bu nke ato, nke ziri ezinọmbabụ n +1. 1, ebee ka nnọmbankeanyịnya igweugbu a. Enwere ike ideghachi akụkụ a dị ka s -1. 1, ebe s bunọmbankeanyịnya igwenwere nke ga - ebute nkewa site na onye òtù ọlụlụ gị.Ọkt 25 2018
Ego ole ka ọ na-efu iji igwe kwụ otu ebe gafee America?
Ndị na-eri na-igwe kwụ otu ebe gafee Americanwere ike ịdị iche na-adabere n'ụdị njem na omume gị. Ekwenyesiri m ike na ndị mmadụ jiri aghụghọ jidere onwe haigwe kwụ otu eberide nke na-erughị $ 1,000 dollar, ma akwado yaigwe kwụ otu ebeịnyịnya nwere ike ịkwụ onye na-agba ịnyịnya nso $ 10,000 mgbe emechara ya.Jenụwarị 19 2016 Nọvemba
Ogologo oge ole ka ọ na-ewe iji gbaa ịnyịnya ígwè gafee US?
Anyịgaatụmatụ na aigwe kwụ otu ebe gafee Americanke ahụ gbara puku kilomita anọ gburugburuga-ewerenkezi onye na-agba ọ dịkarịa ala ụbọchị 61 iji wuchaa. Anyị nwere onweigwe kwụ otu ebe gafee Americawere ụbọchị 80, anyị kpuchie ihe dịka kilomita 4,500.12 nke 2015 g.
Ọ bụ iwu na-akwadoghị ịnya ịnyịnya ígwè na-enweghị okpu agha California?
NaCalifornia, onye ọ bụla dị afọ 18 ma na-arụ ọrụ aigwe, skuta ma ọ bụ skateboard, ma ọ bụ iji skate skates ga-eyi iwuokpu igwe. Nke ahụ pụtara na ọ bụ nyocha ọrụaka nke ntorobịa makaagba igwe kwụ otu ebe na-enweghịna-eyi aokpu aghana nzuzo (ma e wezụga ụzọ ụkwụ).25 nke 2020 g.
Nwere ike ị na-eyi ekweisi mgbe ị na-agba ịnyịnya?
IgweNetwork si dịtụ mfe ule chọpụtara na nọkwa naekweisina ọkwa dị mmana-emeadịghị belata ọnụ ọgụgụ nke mkpọtụ okporo ụzọị nwere ikenụ ihe na-erughị ka nke ndị ọkwọ ụgbọala.Gịkwesiri ịmara ihe na-eme gburugburugị, nke pụtara ilele ụzọ ma ọ bụ ụzọ igwe kwụ otu ebe kama ilegharị anya.